Ikhaya IZITOLO ZaseNingizimu AMERICA FOOTBALL Abadlali bebhola laseBrazil U-Willian Childhood Story Plus
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesidlaliso; "Samba Chelsea". Indaba yethu ye-Willian yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni kanye ne-OFF kanye ne-ON-Pit amaqiniso angakaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngamakhono akhe kodwa bambalwa abheka u-Willian Biography okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
U-Willian Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Isiqalo sokuphila
U-Willian Borges da Silva wazalwa ngosuku lwe-9th ka-Agasti 1988 eRiirairao Pires, eBrazil umama, uMaria da Silva (umgcini wekhaya) nobaba, u-Severino da Silva (imoto engasenayo ingxenye yomdayisi).
Ekuqaleni evela ekhaya elivamile, uWillian wakhula ezama ukuzisiza ngemali yakhe yokudlala idrama. Wakhula edlala zonke izinhlobo ze-samba ukushaya Brazilian amadubhu.
Ngamazwi akhe ..."Uma ngingesiyena inkanyezi yase-Chelsea ngizobe ngidlala imidlalo ye-samba kumadubhu ami Brazil". UWillian wadutshulwa enkundleni yokuxhumana yobungane obuncane noDavid Luiz.
U-Willian wadlala cishe zonke izinsimbi ezithandwa kakhulu eBrazil ngaphambi kokungena emdlalweni webhola.
U-Willian wayengadlala yonke yalezi zinsuku ngesikhathi esesemncane
Ngokusho kwakhe, ... "David wayengumngani wami kusukela ebuntwaneni kusukela eneminyaka eyisishiyagalombili ubudala, futhi kuyisipho esihle esivela kuNkulunkulu sokukwazi ukumhlangabeza e-Chelsea. "
Ngokwamukelwa kwakhe, uWillian wayengenaye owazi kahle kakhulu abafundi esikoleni ngenkathi esemncane. 'Ngangesabekayo,' uyavuma ngokumomotheka. Ngibi kakhulu ngithola umama wami enze umsebenzi wesikole. Akuzange kukhishwe imfundo yilokho okwangikhuthaza ukuthatha ibhola kuze kube yilapho ngisebenza khona. '
Njengabantwana abaningi kangaka Brazil, UWillian wayehlale ebhola ibhola kusukela ebuntwaneni bakhe. Wabheka i-1998 World Cup njengomntwana oneminyaka engu-9 ubudala futhi wayefuna ukuba Ronaldo de Lima Or Zidane. Lezi zindaba zaphefumulela ukuba athathe ibhola kakhulu.
U-Willian Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Isifinyezo somsebenzi
UWillian ungumkhiqizo we-Cornelius football academy. Uqale iqembu leKorinte e-2006 ngaphambi kokujoyina uShakhtar ngo-Agasti 2007 ngemali engu-€ 14 million. Kwakuyisikhathi esithile uShakhtar egxile ekuqasha abadlali baseLatin America. Eminyakeni eyisithupha edolobheni, wathola udumo oluhlanganisa iziqu ezinhlanu ze-Ukraine Premier League kanye ne-UEFA Cup ku-2009.
Umsebenzi we-Willian Wentsha
Ku-2013, wasayina kancane u-Anzhi Makhachkala ngaphambi kokujoyina Chelsea for £ 30 million ngemuva kokubamba amehlo ka-prying of Jose Mourinho.
U-Willian Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphila Komndeni
U-Willian Borges da Silva uvela emlandweni womndeni waseBrazil. Lapha, sikunikeza imininingwane emfushane yomndeni wakhe.
UTABA: Uyise kaWillian u-Severino da Silva uthe ubaba wakhe ungumuntu onomusa kakhulu ngebhola, ngenxa yokusebenza kwengane yakhe.
U-Severino da Silva udutshulwe ngokukwazi kwakhe ukugcina umndeni wakhe kanye nokufunwa kwendodana ekuqaleni kwezinyathelo zomsebenzi wakhe. Ukuthengisa izingxenye ezithengiswayo zezimoto yilokho ayekusebenzisa ukugcina ikhaya lakhe kusukela ekungahambisani. Lokhu kwakungcono izindlela zokunakekela umndeni wakhe. Waze wathuthela ibhizinisi lakhe ngenxa yendodana yakhe. Ngesikhathi u-Willian osemncane engu-10, ubaba wakhe wathuthela umndeni wakhe eSao Paulo ukuze babe eduze neqembu laseCorinthians lebhola lezinyawo ukuze balandele ukusebenza kwendodana yakhe.
UWillian useke wathi ... "Ubaba unesithakazelo kakhulu futhi ngezinye izikhathi ukhuluma kakhulu kakhulu uma kuziwa ekudumiseni nasekuziqhayiseni ngami kubangane bakhe. Ngangikhuluma naye futhi ngamcela ukuba angasho lutho kusukela manje, "
Esikhundleni sokuhlabelela indodana yakhe, uWillian ufake uSerino da Silva esinye ukusetshenziswa. Ujwayele ukuthumela umnikelo wakhe wezezimali emadolobheni aseBrazil nasekhaya lakubo njengesibonakaliso sokumhlonipha emsebenzini wakhe osemusha. Kuze kube namuhla, imiklamo eminingana yemidlalo iye yaqala, konke ngenxa yobuhle nenhliziyo enomusa kaWillian Borges da Silva.
UMAMA: Ngokudabukisayo, unina kaWillian uMaria da Silva uLate. Uqinisekise ukushona kukaMama ekuqaleni kwe-2016. I Chelsea Umdlali we-2015 / 16 wonyaka wembula izindaba ezidabukisayo enkondlo ende ngolimi lwakhe lwangaphakathi ku-Instagram lapho eqinisekisile ukuthi useyisikhathi sokulila.
UWillian wayeveze ngaphambili ukuthi unina, owayenomdlavuza, wayesebenzisa i-chemotherapy ngaphambi kokuba ekugcineni alahleke empini ngesikhathi sekhefu lamazwe ngamazwe. Ngaphambi kokufa kwakhe, bobabili amaqembu asondelene kakhulu njengoba kuboniswe esithombeni esingezansi.
UMaria da Silva nendodana yakhe u-Willian
Phakathi nomdlalo ngokumelene namalungu e-Premier League, uLieicester City, wakhe I-Chelsea FC abalingani beqembu Diego Costa futhi I-Eden Hazard banikezela imigomo yabo kuWillian nonina. Kanye nabalingani bakhe, umphathi wakhe, Antonio Conte futhi wanikezela ukunqoba kwosuku kuWillian nomndeni wakhe.
Umama wakhe uMaria wasebenza kanzima ukuze anakekele umama u-Willian nodadewabo ogama lakhe linguMichele. Wayezokwenza isabelo ngasinye sakwaWillian noMichele ngesikhathi besencane. Ngezansi isithombe sikaMichele.
Udadewabo ka-Willian- Michele da Silva
U-Willian Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphila Ubudlelwano
Indaba kaWillian indaba yothando ihlosene nodade oyedwa. Akekho omunye u-Vanessa Martins. Ube esehlangothini lwakhe emaphethelweni amaningi aseStamford Bridge. Ngaphandle kokungabaza, uyingxenye yobuhle. Ngempela u-Willian wenza abalandeli bakhe baziqhenye ngokuphila kwakhe okumnandi okungekho emkhakheni.
U-Willian's Story Story noVanessa Martins
U-Willian nengelosi yakhe enhle, uVanessa washada ngonyaka, i-2011. Ngaleso sikhathi, akazange acabange ngokuza e-Chelsea. Washada ngesikhathi edlala eShakhtar.
Isithombe sika-Willian noVanessa Martins
Isithelo somshado salandelwa ngemva nje komshado wakhe. I-sharpshooter u-Willian wenza ukuthi kungenzeka ukuba umkakhe akhiphe amahle amawele ngoFebhuwari 2012. Nansi isithombe samawele akhe, kuzo zonke izikhazimulo zazo kuNkulunkulu.
UWillian noVanessa Martins babe namawele abo
Amawele athatha okungaphezulu kwethoni lesikhumba sikayise. U-Valentina noManuelella da Silva kuthiwa bekhula ngokushesha kakhulu njengoba kuboniswe esithombeni esincane se-Mermaid ngezansi.
U-Valentina no-Manuella- Izingane Zama-Twin Zama-Willian
Umndeni kusho okuningi kuWillian. Umzuzwana wakhe omkhulu ufika lapho bonke begubha ukunqoba kwakhe komsebenzi ndawonye njengoba kuboniswe esithombeni ngezansi.
AbaseBrazil nabo babelane ngesithombe esihle kakhulu yena nomkakhe uVanessa Martins njengoba bebelokhu benesikhathi esihle kulokho u-Willian achaza ngokuthi 'I-Official Official Eye'
UWillian noWife bajabulela isikhathi esijabulisayo
U-Willian Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -I-Song of Willian
'I-WILLIAN SONG' ivela ku-Chelsea Fans futhi iqondiswe kubalandeli baseTottenham Hotspur. It utshela indaba ukuthi kanjani Brazilian uthole isimemo esimangalisayo esivela ku-Abrahimovic ngemuva kokuthola imithi futhi ivumelana nemigomo yomuntu siqu nokudlulisa neTottenham.
Ngemva kokusondelwa yi-boss ngaleso sikhathi Jose Mourinho futhi uthola ucingo oluvela ku-Roman Abrahimovic, uWillian waphenduka lo mkhiqizo wabe esehambisa eStamford Bridge enkontileka yeminyaka emihlanu.
"Angazi ukuthi ngingakuchaza kanjani lowo mzuzu," UWillian uthe ngesikhathi exoxwa nomlobi we-Chelsea FC. Waqhubeka .... "Yimizuzu engcono kakhulu engicabanga ngayo empilweni yami lapho ngisayina neCentral ngoba bekuyiphupho lami ukuza lapha. Yebo, kwakunzima ukudiliza i-Tottenham ngemuva kwemithi yami nemigomo yomuntu siqu nabo. Noma kunjalo, I-Its isalokhu ingavumelekile ngoba angizange ngibeke ipeni emaphepha abo. Ngadideka kakhulu lapho u-Abrahimovic engibiza efonini. Ngemuva kokushaywa ucingo, ngokushesha ngitshela abaphathi beTottenham ukuthi ngiyaxolisa, kodwa kufanele ngiye e-Chelsea. Yatshela ukuthi kwakuyiphupho lami. Ngifanele ngiye lapho, angikhathaleli. Kumelwe ngiye eStamford Bridge. "
U-Willian Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Umuntu kaJose Mourinho
Ukuziphatha kwakhe komsebenzi kubonakala kuyisizathu esinamandla Jose Mourinho uyamthanda. Yingakho Jose Mourinho wamkhetha waya kuJuan Mata. Bobabili basebenzise ubudlelwane babababa nendodana kusukela kokuhlangana kwabo kokuqala. Yingakho i eyodwa ekhethekile nakuba esayina uWillian ngesikhathi eManchester United.
I-Untold Bromance phakathi kuka-Willian noJose Mourinho
U-Willian Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Yini akhunjulwa ngayo
Ngisho nalapho ephuma noma ehamba e-Chelsea FC, u-Willian uzokhunjulwa ngalokhu okulandelayo;
Ngenxa yokuzilibazisa, isheshayo, isebenza kanzima futhi isinekhono.
Ngezinyawo zakhe ezisheshayo, ukusheshisa, kanye nesitayela sokudlala.
Ngokuba amandla akhe dribble abaphikisayo abedlule ngenkathi begcina ukulawula okusheshayo ibhola.
Ngokwesitayela sakhe esivamile saseBrazil mayelana nokudonsa izimpawu futhi Tricks, sesha njenge elastico, ukuze kudibanise futhi kushaya abaphikisi.
Ngenxa yokuqina kwakhe okuphezulu, umbono nobuciko okwenza ukuba ahlanganise umdlalo phakathi kwabadlali bezemidlalo abajulile kanye phambili, futhi akhe amathuba okubeka imigomo.
Ngezimangaliso azenzile phakathi nenkathi ye-2015-16 yase-Chelsea.